Dareeraha Stamford Calaacalaysan,Jeneraal Jilicsan,Jahwareer Synchronous AC Adapters
Ma aha oo keliya awoodaan FMW sahayda tamarta korontada Stamford asalka ah, Leroy Somer, Marathon iyo Iskuduwaha Mecc Alte, laakiin awoodda FMW ayaa sidoo kale naqshadeyneysa iyo soo saaraya beddel-rogaaliye la'aan oo leh fasalka H rinjiyeynta, 2/3 garoonka iyo ilaalinta IP23 adoo raacaya oo baaraya tiknoolajiyada caalamka caanka ah koronto-dhaliye Magacyada sida Stamford iyo Leroy Somer. FMW AC Synchronous koronto-dhaliye waxay ku habboon yihiin kuna xiraan nalalka kasta mashiinnada aduunka sida Cummins, Perkins, Deutz, Doosan, Volvo, Kubota iyo nooc kasta oo Diesel Shidaal ah oo leh adegga caalamiga ah ee SAE ama hal gelin. AC synchronous koronto-dhaliye awoodda FMW waxay dhalin kartaa wax soo saarka korontada 4kw ilaa 1200kw .
354 Qalabka Calaamadaha Iskudhufka AC
(364kw-660kw) FMW beddel-rogaaliye la'aan ee soo saariddan baaxadda waxaa si sax ah loogu talagalay loona soo saaray si ay ula socdaan naqshadeenta asaasiga ah ee Stamford AC HCI544 oo ay ku jiraan qiyaasta farsamada, mid kasta iyo mid kasta, iyo naqshada muuqaalka.
354 koronto-dhaliye la'aan 354 bedelka qalabka aan xoq lahayn 354 taxane ah oo kale 354 koobiyeyn taxane ah 354 bedelaad beddel la'aan 354 qalab beddelka ac
404 Qalabka Calaamadaha Iskudhufka AC
(600kw-1210kw) FMW beddel-rogaaliye la'aan ee soo saariddan baaxadda waxaa si sax ah loogu talagalay loona soo saaray si ay ula socoto naqshadeenta asaasiga ah ee Stamford AC HCI634 oo ay ku jiraan shaandhaynta farsamada, mid kasta iyo mid kasta, iyo naqshada muuqaalka.
404 bedelaad beddel la'aan 404 bedelka qalabka isdabajooga ah 404 dab-dhaliye xayawaan ah 404 qalab beddelka ac 404 taxane qalab loo yaqaan 'ac alternator 404 koronto-dhaliye la'aan